रुपा जी म तपाईको ब्यवहार अनि ब्याक्तित्वबाट साह्रै प्रभा’वित भए अनि जातपातको कुरा विल्कुलै मन नपराउने हुँदा मेरो हृदयले तपाईं रुपा जीलाई नै अंगालो अंगालो लाग्यो ।
म सार्कीको छोरा हु, हाल क्यानडामा पढाईसँगै रोजगारी गर्दौ छु । हो हामी द’लित हौं, हाम्रो समाजले हामीलाई तल्लो वर्गमा राखेको छ अनि त्यस्तै परि’भाषित गरेको छ । तर हामी विल्कुलै आफुलाई हेपिने र तल्लो वर्गको हु भनेर, संकुचित सोच्नु राख्नु हुदैन जस्तो लाग्छ ।
हुन्छ रुपा जी म सार्कीको छोरा पढाइ स्नातकोत्तर गर्दै छु सायद मेरा साथीहरुको भनाईमा पक्कै नराम्रो छैन भन्ने लाग्छ अनि सोच पक्कै तपाईकोभन्दा एडभान्स छ त्यसैले आउनुहोस जातीय विभेदविरु’द्ध एकजुट हौं र त्यसको सुरुवात तपाई कामी अनि म सार्कीको विवाहबाट गरौं ।
आउनुहोस हामी विवाह गरौं । यहाँ जात हैन जातको नाममा पैसा कमाउनेले हामीलाई दलित बनाएका छन अनि उपल्लो जात हुनेले हैन त्यही दलितको पैसा खानेले हामीलाई झनै
द’लित बनाउदैछन! तपाईं जस्तो मिडियाकर्मीले पनि जातको कुरा गरेको सुहाउछ र ? के तपाईं मलाई अथवा कुनै सार्की तपाईं जुन तपाईको कामी जातभन्दा तल्लो तपाईं आफै मान्नु हुन्छ!
ती जातसँग विवाह गर्न तयार हुनुन्छ यदि ती युवक तपाईले चाहेको धन सम्पत्ति अनि पढाइ छ भने ! के तपाईं यस्को उत्तर दिनसक्नु हुन्छ ? हैन भने हामी मिलेर बसेको समाजलाई धमिलाउने प्रयास नगर्नु होला । धन्यवाद उहीँ सार्की केटो हाल क्यानडा
हेमराज थापा : हामी एमसीसीका पक्षधर कसैलाई पनि छो’ड्दैनौँ ।(भिडियो सहित)
कलाकार को कुनै जात धर्म हुदैन , कलाकार कि हिन्दु राष्ट्रको मेसिनरी !